Jaamacada Bolu Abant Izzet Baysal Oo Sameynaysa Shaqaalaysiinta Shaqaalaha Akadeemiyada | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaJaamacadda Bolu Abant Izzet Baysal waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaalaha tacliinta
13 / 12 / 2019 Shaqooyinka, GUUD
bant abant izzet baysal jaamacadeed wuxuu ka dhigi doonaa shaqaaleynta shaqaalaha tacliinta
Jaamacada Bolu Abant Izzet Baysal ayaa ku dhawaaqday shaqaalaysiinta shaqaalaha 58 shaqaalaha si ay uga mid noqdaan macalimiinta iyo xubin ka mid ah kuliyadaha.
BOLU ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY XUQUUQDA AQBALKA
Abant İzzet Baysal University of Bolu, iyada oo la raacayo qodobbada ay quseyso ee Sharciga No. 2547 iyo Qaanuunka ku saabsan Gudbinta iyo Ballan-siinta Xubnaha Kuliyada iyo qodobbada Tilmaamaha Kordhinta Aqoonta iyo Ballan-qaadista ee Jaamacaddayada, 657 Law No. 48. in la bixiyo shuruudaha lagu sheegay qodobka.
Muddada codsigu waa shan iyo toban (15) maalmood laga bilaabo taariikhda la daabacay xayeysiinta. Codsiyada waxaa lagu sameyn doonaa qof ahaan iyo codsiyada aan lagu qaban waqtigii loogu talagalay, dukumentiyada maqan iyo arjiyada boostada lama aqbali doono.
Aqoonyahanada aqoonyahanku waxay kujiraan xaalad rasmi ah; Musharaxiintu waxay kuxiran doonaan shaqada cilmi baarista ugu weyn arjiga ay cadeeyeen, shahaadada xiriirinta jaaliyadaha, dukumiintiyada kale ee barashada, sawir qaadashada kaarka aqoonsiga, 1 (hal) sawirro, 1 (hal) feylasha ay kujiraan daraasadaha sayniska iyo daabacaada, iyo 6 oo loo diyaariyey qaab PDF. (lix) CDs ama xusuusta la qaadan karo oo ay la leedahay Rectorate-ka si loogu codsado Waaxda Shaqaalaha.
Aqoonyahanada iskaashatada ah waxay kujiraan xaalad rasmi ah; 1 (mid) faylalka, oo ay ku jiraan 1 (mid) sawir, 4 (hal) sawir, CV iyo daraasado saynis iyo daabacado, iyo XNUMX (afar) CDs oo loo diyaariyey qaab PDF, ama xusuusta la qaadan karo.
Musharixiinta inay codsadaan xubnaha kuliyadda ee dhaqtarka; 1 (afar) CD ama xusuusta la qaadan karo, oo lagu diyaariyey qaab PDF ah, oo ay ku jiraan dukumintiga daraasadda, sawir-qaadashada kaarka aqoonsiga, 1 (mid) sawirro, CV iyo daraasado saynis iyo daabacaad, waaxda lagu dhawaaqay. Musharixiinta ayaa waxaa ka mid noqon doona magacyada iyo cinwaannada saddexda xubnood ee macallimiinta kuwaas oo tixraacyadooda sayniska la heli karo.
U-sinnaanta shahaadooyinka dibedda laga soo qaatay waa in ay ansaxiyaan Gudiga Kala-guurka.
BOLU ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY FACULTY FACULTY FARSAMO
(Lecturer iyo Kaaliyaha Cilmi-baarista)
Abant İzzet Baysal University of Bolu waxaa loo shaqaaleysiin doonaa iyada oo la raacayo qodobbada la xiriira ee Xeerka Nidaamyada iyo Mabaadi'da Imtixaanaadka Bartamaha iyo Imtixaannada Galitaanka ee lagu dabaqi doono cutubyada soo socda, Sharciga 2547 iyo Ballamada loogu talagalay Shaqaalaha Tacliinta ee aan ahayn xubinta Kuliyadda.
(1) 657 Sharciga No. Shaqaalaha Rayidka ah ee 48 Qodobka si loo buuxiyo shuruudaha.
(2) Ugu yaraan 70 laga bilaabo ALES, ugu yaraan dhibcaha 50 ee imtixaanka luqadda ajnabiga ah ee ay aqbaleen guddiga Tacliinta Sare ama dhibco u dhigma imtixaan loo aqbalay inuu u dhigmo. Dhibcaha ALES waxaa loo tixgeliyaa sida 70 ee qiimeynta kahor iyo marxaladaha qiimeynta ugu dambeysa ee kuwa doonaya inay ka faa'iideystaan ​​ka dhaafitaanka imtixaanka dhexe.
(3) Qiimaynta hore iyo qiimaha u dambeeya
U-sinnaanta nidaamyada fasalka 4 iyo 5 ee loo adeegsado xisaabinta fasalka qalin-jabinta heerka koowaad ee heerarka magacaabista waxaa go'aamiya go'aanka Golaha Tacliinta Sare. U-sinnaanta nidaamyada kale ee wax lagu kala beddelo nidaamka '100 system' dhibco-bixinta waxaa go'aamiya waayeellada hay'adaha waxbarashada sare.
Shuruudo Gaar ah
(1) Codsiyada loogu talagalay kaaliyeyaasha cilmi-baarista ee hay'adaha waxbarashada sare ee gobolka, waxaa looga baahan yahay inuu noqdo shahaadada mastersiga, shahaadada jaamacadda ama aqoonta xirfadeed ee ardayda wax barashada farshaxanka lehna.
(2) Murashaxiinta u codsan doona shaqaalaha barista waa inay lahaadaan ugu yaraan shahaadada heerka labaad ee saynis ama ay ka qalin jabiyaan barnaamijyada bixiya labadaba shahaadada koowaad iyo labaad.
(3) Murashaxiinta u adeegsan doona macallimiinta wax barista ee ku takhasusay go'aamada ay soo saareen Golaha Tacliinta Sare ee kuliyadaha xirfadda waa inay ugu yaraan haystaan ​​shahaadada heerka labaad ee aqoonta ama ay haystaan ​​ugu yaraan laba sano oo waayo-aragnimo ah marka la joogo markay qalin-jabiyaan oo ay caddeeyaan.
(1) Shuruudda imtixaanka dhexe looma baahna kuwa soo dhammaystiray dhakhtarnimadooda ama dawadooda, ilkeed, farmasiiga iyo cilmiga caafimaadka xoolaha ama aqoonta farshaxanka, kuwaas oo loo qoondeyn doono goobaha takhasuska ah ee iskuulada xirfadaha ee ay go’aamiyeen Golaha Sare, iyo kuwa ka shaqeeyay ama ka shaqeeyey shaqaalaha tacliinta ee machadyada tacliinta sare.
(2) Shuruud luuqadeed ajnabi looma baahna codsiyada in loo sameeyo shaqaalaha waxbaridda ee iskuulada xirfadaha marka laga reebo shaqaalaha barista ee sadarka afraad ee qodobka 6 ee Xeerarkan.
Codsiyada ardayda qalin jebisa ka qalin jebisa ee shaqaalaha barista
(1) Kuwa ka diiwaangashan barnaamijyada 'non-thesis Master' ka hor taariikhda 14 / 3 / 2016 oo ka qalin-jabiyay barnaamijyada 'non-thesis Master' ka hor 9 / 11 / 2018, waa inay codsadaan xubnaha macallimiinta ee looga baahan yahay inay ugu yaraan shahaadada heerka labaad ku bartaan cilmiga. Xeerarka sadarka 3 iyo 4 ee Qodobka 3 ma quseyn doonaan. Kuwa ka qalin-jabiya cilmiga aan-gaarka loo aqoon ayaa loo magacaabaa shaqaalaha wax-baridda muddo saddex sano ah. Xaaladda guud, kuwa la magacaabay waxaa looga baahan yahay inay dhammaystiraan barnaamijyada sayniska ee shahaadada ku qaataan arimahooda inta lagu jiro muddada meeleynta. Kuwa ku guuldareysta inay dhammaystiraan barnaamijyada sayniska ee xisaabaadka ay ku leeyihiin aagagga mudada dhexdeeda dib looma qoondeeyey.
Jaamacadda Burdur Mehmet Akif Ersoy waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaalaha tacliinta
Bolu Abant İzzet Baysal wuxuu qoray qorista shaqaalaha aqoonyahan ee jaamacadda